Maxaad fileysaa inuu Bangiga Dhexe ku soo kordhin doono Guddoomiyaha cusub? – Kalfadhi
Bangiga Dhexe ayaa wixii maanta ka dambeeya uu hogaamin doonaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi, kaas oo shalay xilka kala wareegay Guddoomiyihii hore Bangiga, Bashiir Ciise Cali. Cabdiraxmaan ayaa dhawaan loo magacaabay xilkaas, kadib muddo oo looga baqdin qabay iney xukuumaddu u dhiibi doonto Maamulka Bangiga Dhexe qof ajnabi ah, taas oo ka dambeysay markii uu Golaha Shacabku dib-u-eegis ku sameeyey Xeerka Bangiga Dhexe.
“Gude iyo dibadba (Bangiga Dhexe) xiriir buu ku leeyahay” ayuu yiri Guddoomiyaha xilka lagala wareegay maanta, Bashiir Ciise Cali. “Bangiyo badan, oo toban gaaraya, wuxuu (Bangiga Dhexe) siiyey leysin” ayuu hadalkiisa raaciyey. Waxa uu sheegay in 10-kii sano ee ugu dambeeyey, oo dib loo yegleelay bangiga, uu caqabado badan ka soo gudbay, ayna aaminaaddiisu hadda soo hagaagtay. Goobta xil wareejinta waxaa joogay Wasiirka Maaliyadda, Cabdiraxmaan Beyle.
“Farxad bey ii tahay in maanta bangiga, oo maraya meel wanaagsan, xili aad u adagna soo maray, laakiin kabasho badan sameeyey, oo u baahan baritaar iyo in wax ka dhiman oo yar lagu kordhiyo, uu igu soo wareejiyo Guddoomiyihii hore” ayuu yiri Guddoomiyaha cusub ee bangiga, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi. “Hogaan ahaan, waxaan idinka balan-qaadayaa inaan noqdo hogaan shaqo, oo ay diiraddiisu tahay in wixii la soo qabtay wax lagu daro” ayuu raaciyey hadalkiisa.
Bangiga Dhexe, oo xudun u ah kor u kaca dhaqaalaha dalka, burbursanaana ugu yaraan 20 sano, ayaa intii uu shaqeynayey (2009-2019) waxa uu si caga-jiid ah ku soo gaaray waqti uusan dalku haysan Shillin, walina aysan cadeyn sida uu, bangi ahaan, u maamli karo Shillinka yar ee hadda haraadiga ku ah dalka iyo waliba sida uu ula socdo inta macaamil-ganacsi ee ay sameeyaan bangiyada gaarka loo leeyahay.
Laakiin, xukuumaddu waxay ku celcelisay iney aad hormar uga sameysay dhinaca hufnaanta dhaq-dhaqdhaqaaqyada ka dhex dhaca xisaabaadyada dowladda ee Bangiga Dhexe. Mucaaradkusa, gaar ahaan Xildhibaannada Baarlamaanka qaar badan oo ka mid ah, waxay tuhun ka qabaan saxnimada arrinkaas, sida ay dhawr mar Kulamada Baarlamaanka ka muujiyeen.
Wasaaradda Maaliyadda oo bilowday in ay Dowlad Goboleedyada ka taageerto soo ururinta canshuuraha